Izindaba - Ngokubambisana ne-PG & E: UTesla uzovula iphrojekthi enkulu kakhulu yokugcina amandla eCalifornia
Ngokubambisana ne-PG & E: UTesla uzovula iphrojekthi enkulu kakhulu yokugcina amandla eCalifornia
Ngokwemibiko yabezindaba yakwamanye amazwe, uTesla usefinyelele ekubambisaneni nePacific Gas Power Company (PG&E), enye yezinkampani zamandla zamandla amakhulu eMelika, ukukhiqiza uhlelo olukhulu lwamabhethri olunamandla afinyelela ku-1.1GWh kokugcina. Abakwa-Electrek babike ukuthi le projekthi inkulu kunazo zonke iTesla ayisungule kusukela ngonyaka ka-2015 kanti iseCalifornia, e-USA. I-PG & E isebenza cishe abantu abayizigidi eziyi-16 enkabeni nasenyakatho yeCalifornia. Ifake izicelo zokuvunywa zamaphrojekthi amane wokugcina amandla ku-California Public Utility Commission (CPUC) ngeledlule.
I-Tesla izonikezela ngamaphakethe webhethri wephrojekthi entsha, ngokukhishwa okuphelele kwe-182.5MW kanye nesikhathi esifika emahoreni angama-4. Lokhu kusho ukuthi inani eliphelele elifakiwe lifinyelele ku-730MWh, elingana namasethi angaphezu kuka-3000 weTeslaPowerpack2.
Ukuthatha idatha yango-2016 kwa-US Energy Information Administration njengesethenjwa, ukusetshenziswa okujwayelekile konyaka kukagesi kwamakhasimende enkampani ehlala e-US kungama-10,766 kWh, okusho ukuthi iphrojekthi entsha inganikela ngogesi emizini engaba yikhulu unyaka wonke.
Uma kuvunyelwe, iqembu lokuqala lamaphrojekthi kulindeleke ukuthi lihambe online ngaphambi kokuphela konyaka ka-2019, kanti amanye amaphrojekthi kulindeleke ukuthi ahambe online ngaphambi kokuphela kuka-2020. Ngokuthabisisayo, lokhu kubonakala kuhambisana nezinhloso zikaMusk.
Ngo-2015, uMusk ekuqaleni wamemezela ukuthi "iTesla Energy" yesikhathi esizayo izosetshenziselwa amaphrojekthi anesilinganiso se-1GWh. Kepha ukubona lokhu kwenzeka, kufanele ulinde iminyaka emithathu.
Ekupheleni konyaka we-2017, uTesla wenza ukubheja nohulumeni waseNingizimu Melika, ethi inkampani ingakuqedela ukufakwa kohlelo lokugcina amandla amakhulu ebhethri kungakapheli izinsuku eziyikhulu, futhi isebenzise indlela yokuncishiswa nokwehliswa kwezigodi ukunciphisa amandla asendaweni inkinga yokuphuma. kuqedile.
Yize iTesla yaziwa kakhulu ngokwakha izimoto zikagesi, ukusuka e-Australia iye ePuerto Rico, inkampani iphinda inikezele ngegridi yamandla omhlaba ukwenza amandla avuselelekayo ashibhile.
Iphrojekthi yaseNingizimu Australia ithole impumelelo enkulu kwezohwebo, futhi kulinganiselwa ukuthi isindise imali engaphezu kwezigidi ezingama- $ 30 ezinyangeni ezimbalwa nje. Umlingani weMcKinsey uGodartvanGendt uthe emhlanganweni obizwa ngeAustralia Energy Week eMelbourne ngoMeyi nonyaka:
Ezinyangeni ezine zokuqala ukusebenza kwephrojekthi yokulondolozwa kwamandla ka-Hornsdale, imvamisa yezinsizakalo ezincedisayo incishiswe ngo-90%. ENingizimu Australia, amabhethri ayi-100MW athola ngaphezulu kwe-55% yemali yeFCAS, okungukuthi, ene-2% yomthamo wokukhiqiza, anikela ngama-55% wemali engenayo.
I-FastCompany ibika ukuthi eminyakeni emithathu nje, inkampani ifake ingqalasizinda eyanele ukugcina ingqikithi yamandla ayi-1GWh, okubaluleke kakhulu ekusebenziseni kahle amandla avuselelekayo.
Ngonyaka owedlule, uTesla wenza inkontileka yezindawo ezigcina kakhulu amandla emhlabeni. Ukuthuthukiswa kwe-1.1GWh yamaphrojekthi amasha kuzothuthukisa amandla wezinsiza zayo zamandla.
Kungakusho ukuthi izindleko zokugcina amabhethri kuyo yonke imboni ziyaqhubeka ukwehla-kusuka ngo-2010 kuya ku-2016, kwehle ngamaphesenti angama-73, okungukuthi, kusuka kumadola ayi-US aseMelika nge-KWh eyodwa kuya kuma-273 amadola aseMelika.
IBloomberg ilindele ukuthi ngonyaka ka-2025, le ndleko izokwehla iye ku- $ 69.5 / KWh. Siyethemba ukuthi imizamo kaTesla eqhubekayo izogqugquzela abaphikisi abaningi ukuthi bahlanganyele kulo mncintiswano ukuze kuqhutshekwe kusheshiswe le nqubo.
Iphakethe lebhethri lamandla, Amaseli ebhethri weLithium Ion, Ibhethri Lithium Lamandla, I-20ah Lithium Ion Ibhethri, Ibhethri le-3.6v Lithium-Ion, I-Power Lithium Battery Pack,